HomeWararka Ciyaaraha MaantaManchester United oo 40 milyan oo ginni ku dalbaneysa Raphael Varane
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay isku diyaarineyso inay dalab 40 milyan ginni ah ka gudbiso daafaca Real Madrid Raphael Varane .
Red Devils ayaa la filayaa inay la soo wareegto daafac dhexe oo cusub kooxda xagaagan si ay ula wadaagaan Harry Maguire , Varane ayaa si xoogan loola xiriirinayay inuu u wareegayo Old Trafford bilihii la soo dhaafay.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Faransiiska ayaa weli ah shaqsi muhiim u ah Bernabeu, laakiin qandaraaskiisa haatan wuxuu dhacayaa xagaaga soo socda, waxaana jiray soo jeedino ku saabsan in Madrid ay u furan tahay inay iibiso suuqa soo socda
Sida laga soo xigtay The Mirror , Man United ayaa 40 milyan ginni ku dalbaneysa xiddiga ku guuleystay Koobka Adduunka, kaasoo la sheegay inuu doonayo inuu u dhaqaaqo Premier League inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Warbixinta ayaa sheegeysa in kooxda 20ka jeer hanatay horyaalka Ingariiska inay ku guuldareysatay inay lasoo saxiixato Varane labo jeer oo hore laakiin haatan waxay ku kalsoon yihiin inay keenaan kooxda ka hor xilli ciyaareedka 2021-22.
Daafaca dhexe, oo sidoo kale lala xiriirinayay Chelsea iyo Paris Saint-Germain , ayaa dhaliyay labo gool 40 kulan oo uu u saftay kooxda Zinedine Zidane xilli ciyaareedkan.